गीतकार भावेश अचानक हाम्फालेपछि उनका साथीहरु आश्चर्यमा – Pahilo Page
गीतकार भावेश अचानक हाम्फालेपछि उनका साथीहरु आश्चर्यमा
काठमाडौँ । गीतकार भावेश भुमरी अचानक हाम्फालेका छन् । उनी हाम्फालेपछि उनलाई नजिकबाट चिन्ने साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरु आश्चर्यमा परेका छन् । यो सोचेर कि उनी किन यसरी हाम्फाले ?
विगत साढे दुई दशकभन्दा पहिलेदेखि नेपाली गीत लेखनमा लागेका र आफ्नो छुट्टै अनि स्पष्ट पहिचान बनाएका गीतकार भावेश भुमरीले जीतकर्ण राईको रचना, दिनेश सुब्बाको सङ्गीत, चाँद सिंहको सङ्गीत संयोजन र उदय सोताङको स्वर रहेको अत्यन्त मार्मिक मिर्मिरेमा… बोलको अडियो गीतलाई म्युजिक भिडियो बनाउने कार्यमा निर्देशनको जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । यस गीतको भिडियोमा कलाकारहरू सनम कठायत र रिजा भुसालको अभिनय रहेको । भिडियोमा क्यामेरा उत्सव दाहालले चलाएका छन् । पहिले गीत लेख्दै, रेकर्ड गर्दै र एल्बम निकाल्दै आएका भुमरी आफ्नै गीतहरूको बजार व्यवस्थापनका लागि सुरप्रभा गीत सङ्गीत प्रा. लि. म्युजिक कम्पनी, गीत रेकर्डिङका लागि ह्वाइट साउन्ड स्टुडियो र युटुव भिडियोका लागि सुरप्रभा गीत सङ्गीत प्रा.लि. च्यानल सञ्चालन गर्नसम्म आइपुगेका छन् ।
मिर्मिरेमा… गीतमा भूमिका निर्वाह गरेका मोडल सनमले निर्देशक भुमरीसँग काम गर्दाको मज्जा अलि फरक भएको कुरा राखेका छन् । म्युजिक भिडियो स्तरीय र जीवन्त रहेको उनले दावी गरेका छन् । यस गीतको भिडियो चाँडै नै युटुवमा आउँदै छ ।
प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, मंसिर १९, २०७४ समय : १४:०८:१७ 1327 पटक पढिएको